I-SEO: Iindlela ezi-5 zokuLungiselela uPhando lweOrganic kaGoogle | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 13, 2017 NgoLwesihlanu, Oktobha 13, 2017 Douglas Karr
Umbuzo endiwubeke kwiminyhadala emibini endithethe kuyo kwingingqi yindlela iinkampani ekufuneka zahlule ngayo uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa lube nefuthe eliphezulu. Akukho mpendulo ilula kule nto. Ifuna ukuba iinkampani ziyiqonde ngokupheleleyo impembelelo yeedola zazo zangoku zentengiso, ukuqonda ukuba itshaneli nganye inefuthe lini kwenye, kwaye isenayo imali yovavanyo kunye nokwenziwa kwezinto ezintsha kwizicwangciso ezingazamkelanga.
Ingqwalaselo nganye kuhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa, nangona kunjalo, kufuneka iqhubeke nokukhangela kwitrafikhi yeinjini yokukhangela. Qaphela ukuba khange nditsho enjini yokukhangela noun. Ixesha eli lihlala lixhonywe kwiziseko zophuhliso, uphuhliso lwasemva kokuphela, kunye neendlela zonxibelelaniso ezingasenazimpembelelo zangaphambili. Ngapha koko, ukuba unomcebisi we-SEO osebenza nenkampani yakho kwaye kugxilwe kubo kwezo ndawo kwaye hayi kwindlela yokuziphatha kweendwendwe, amacebo omxholo, iindlela ezininzi, kunye nezinye iindlela ... kufuneka ufumane entsha Umcebisi wophendlo lwezinto eziphilayo.
Xa kuza ku enjini yokukhangela noun (SEO), ekuphela kwento eqhubekayo kukutshintsha. Nangona amava kwinqanaba lokusebenzisa imveliso esisiseko kaGoogle evakalelwa njengabasebenzisi, abathengisi bedijithali abanolwazi bayazi ukuba isiseko asize siyeke ukutshintsha. Nokuba kungenxa yotshintsho kwindlela yokuziphatha yentengiso okanye ngenxa yokuhlengahlengiswa kulungelelwaniso olunamandla onke, yintoni eyenza inqanaba lephepha kakuhle kukhangelo liqhubeka ngokuhamba. Intengiso ye-MDG
Ngapha koko, ebutsheni balo nyaka bekukho ukwehla kwe-50% ukuya kwi-90% yokugcwala kokukhangela okuphilayo emva kokulungiswa kweziza zikaGoogle ezazinzima kumakhonkco obulungu kunye nokukhanya kumxholo! Izinto eziphambili ezinxulumene namazinga aphezulu eGoogle ngala:
Inani lotyelelo lwewebhusayithi
Ixesha lesiza (okanye ixesha lokuhlala)
Amaphepha ngeseshoni nganye
Ngamanye amagama, uGoogle uchonga ukuba ingaba isiza sakho sisisixhobo somgangatho apho iindwendwe zinqwenela ukuhlala zisebenzise, ​​okanye ukuba sisiza esimalunga nokuloba abantu abanomxholo ongekho nzulu ongenalo ixabiso londwendwe. UGoogle ufuna ukuhlala ephezulu kumzi-mveliso wophendlo lwezinto eziphilayo kwaye ukuze enze njalo, kufuneka abeke iiwebhusayithi ezikumgangatho ophezulu, ukutyelela okuphezulu, kunye nokugcinwa okuphezulu. Iwebhusayithi yakho kufuneka ibe sisibonelelo sepremiyamu solwazi esijolise kubaphulaphuli bakho kwaye sigcine ukubuya kwabo. Cinga ngendawo yakho njenge ilayibrari yomxholo.
Imikhwa eyicacisayo ukuba intengiso ye-MDG iyayixhasa kwaye iyayixhasa kwi-infographic yayo ibandakanya:
site uphawu ibaluleke ngoku kunakuqala.
Ngobunzulu, ukubandakanyeka umxholo ithambekele kwinqanaba eliphezulu.
smartphones zibe sisixhobo esiphambili sokukhangela.
Ukukhangela kuya kusiba ngakumbi ibalulwe.
zeMveli I-SEO sisiseko, ayisiyoncedo.
Ukuthatha ezi zinto kuthathelwa ingqalelo, ungalwenza njani ugcino lwakho lwentengiso yedijithali yokuphucula uphando lwezinto eziphilayo? Sisebenza nayo yonke imixholo yethu ekunciphiseni ukubalwa kwamanqaku afanayo kwiindawo zabo kunye nokubhala nzulu ngakumbi, amanqaku apheleleyo abatyeleli abaza kubhekisa kuwo. Sisebenzisa imifanekiso, iaudiyo, kunye nevidiyo ukunceda ukucacisa ulwazi olubhaliweyo esikunika lona. Kwaye siqinisekisa ukuba konke kuyafikeleleka ngokukhawuleza kwizixhobo eziphathwayo, nazo.
Nantsi infographic epheleleyo, Uphendlo lukaGoogle kwi2017: Iindlela ezi-5 ze-SEO zokubukela:
tags: mdgmdg intengisouphando lwezinto eziphilayoIindlela zokukhangela eziphilayoiindlela zokukhangelaiintsingiselo seo